Fampitandremana Sivana Nataon’i Rosia Tamin’ny Foibe Fampielezam-Peo, Nahatonga Tebiteby Vetivety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2017 4:47 GMT
Notaterin'ny lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny fampielezampeo, Alexey Venediktov, tamin'ny taona lasa fa efa nandray fepetra mba hifanaraka amin'ilay lalàna ny fampielezampeo : efa nahenan'ny orinasa Amerikana EM-Holding, tarihin'ilay Rosiana Vladmir Gusinsky, ho 19,9 isanjato ny anjarany izay 34 isan-jato mba hifanaraka amin'ilay lalàna. Ny Gazprom Media, rantsan'ny orinasan'angovom-panjakana goavana Gazprom no tompon'ny 66%-n'ny fampielezampeo.
Na tsy lazain'ilay lalàna mazava tsara aza fa tsy tokony ho orinasa voasoratra ara-panjakana any Etazonia ilay manana petra-bola, tany am-boalohany dia naneho ny ahiahiny ireo sasany fa nadikan'ny Roskomnadzor ho fandraràna tanteraka izay rehetra fampiasambola avy any ivelany amin'ny haino aman-jery ilay lalàna.
Fa nohazavain'ireo mpiasan'ny Roskomnadzor fa tsy misy ifandraisany amin'izay mety ho fanakatonana ny foiben'ilay fampielezampeo ny taratasy nalefany. Nolazain'ilay solontena avy amin'ilay rafitra, Vadim Apelonsky, tamin'ny Life News fa ” taratasy filazana ara-teknika, mampahatsiahy ny ilàna ny fanarahana ny fomba ara-dalàna mikasika ny fanànan'ny vahiny ao amin'ny haino aman-jery Rosiana” fotsiny iny. Namafisin'i Leonid Levin, ilay filohan'ny vaomieran'ny fifandraisana ao amin'ny Duma-n'ny fanjakana Rosiana fa ” tsy fandikàn-dalàna amin'ny resaka petra-bolan'ny vahiny tompony ” ilay taratasy “fa ilaina ho ara-potoana ny antontan-taratasy manome amin'ny antsipirihiny” momba ireo anjarany.
Tsy vao voalohany ny Ekho Moskovy no nisintona manokana ny sain'ny governemanta Rosiana. Tamin'ny Oktobra 2014, naharay fampitandremana avy amin'ny Roskomnadzor momba ilay fandrakofany ny ady tany Okraina ilay foibe fampielezampeo. Herinandro vitsivitsy talohan'izay, nanambara ny minisitry ny Asa Vonjy Taitra Rosiana fa nikasa ny hanao fitsidihana tselika ny foiben'ilay fampielezampeo, paikady mahazatra fanao rehefa hanakatona orinasa sy sampan'orinasa izay tsy ankasitrahan'i Kremlin.
Fantatra amin'ny fanolorany ireo karazana fomba fijery midadasika ilay fampielezam-peo, isan'izany ny an'ireo mpikatroka avy amin'ny mpanohitra. Isan'ny vahininy matetika i Vladmir Kara-Murza, ilay sahy mitsikera ampahibemaso an'i Putin, izay vao avy narary mafy fanindroany tao anatin'ny roa taona, angamba niniana nopoizinina. Mpandray anjara matetika ihany koa ilay mpiady amin'ny kolikoly sady lehiben'ny mpanohitra, Alexey Navalny ; nomelohin'ny fitsarana Rosiana ho nanao fanodikodinam-bola izy tamin'ny herinandro voalohan'ny Febroary, izay manakana azy tsy hanao fampielezankevitra hanohitra an'i Putin amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2018.